Ingqungquthela yeGreater Miami kunye neZiko leeNdwendwe labhengeza uMongameli omtsha kunye ne-CEO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Ingqungquthela yeGreater Miami kunye neZiko leeNdwendwe labhengeza uMongameli omtsha kunye ne-CEO
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UDavid Whitaker wonyulwe njengoMongameli kunye ne-CEO elandelayo yombutho wentengiso oya eGreater Miami naseMiami Beach.
Ukuchongwa kukugoduka kukaWhitaker obesebenza njengelungu leqela le-GMCVB iminyaka eli-17.
UWhitaker washiya iMiami ekuqaleni ngo-2007 ngenxa yokuqeshwa kwindima kaMongameli kunye ne-CEO yezoKhenketho eToronto.
Kule minyaka mihlanu idlulileyo, uWhitaker usebenze njengoMongameli kunye ne-CEO yeChicago, i-DMO yaseChicago.
The Ingqungquthela yeGreater Miami kunye neZiko leeNdwendwe (GMCVB) ubhengeze namhlanje ukuba uDavid Whitaker uqeshwe njengo-Mongameli kunye ne-CEO elandelayo yombutho wentengiso (i-DMO) ye-Greater Miami kunye neMiami Beach. Ukuchongwa kukugoduka kukaWhitaker obesebenza njengelungu leqela le-GMCVB iminyaka eli-17 (1990 - 2007), kutsha nje njengoSekela Mongameli oLawulayo wombutho kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso. Kwiminyaka emihlanu ngaphambi koko, wakhonza kubaphathi abaphezulu kwiNdlela eManyeneyo yaseMiami-Dade.
UWhitaker ushiyekile Miami Ekuqaleni ngo-2007 ngenxa yokuqeshwa kwindima kaMongameli kunye ne-CEO yezoKhenketho eToronto (ngoku eyaziwa njenge-Destination Toronto), i-DMO yaseToronto, apho wakhokela umbutho iminyaka esibhozo. Ngexesha lokuhlala kwakhe eToronto, umbutho wavotelwa njengeyona ndibano iphambili eMntla Melika kunye neofisi yabatyeleli kunye neziko lendibano kwindawo yokuvota yabacwangcisi beentlanganiso abangaphezu kwama-650. UWhitaker ukhokelele amabhidi aphumeleleyo ukusingatha i-NBA All-Star Game kunye nePan American / Parapan American Game.
Ukugqitywa kokuhlala kwakhe eToronto nakwiminyaka emihlanu edlulileyo, uWhitaker usebenze njengoMongameli kunye ne-CEO yeChicago, i-DMO yaseChicago. Ngexesha lokuhlala kwakhe eChicago, wayenembopheleleko yokuthengisa kunye nokuthengisa elona ziko likhulu lendibano eMelika, iMcCormick Place. Ngaphantsi kobunkokheli bakhe, i-DMO yafaka ngempumelelo kwaye yabamba umdlalo we-NBA All-Star Game, iMLS All-Star Game, umnyhadala wokuqala weNdebe yeTennis ye-North America, i-NCAA Frozen Four, kunye neminyhadala yebhola ekhatywayo kunye nombhoxo. IChicago, njengendawo ekuyiwa kuyo, ivotelwe kuphando oludumileyo lwabafundi be-savvy ye-CondéNast Traveler Readers' Amabhaso okukhetha “njengesiXeko esiBalaseleyo” ukutyelela iminyaka emine elandelelanayo engazange ibonwe (2017 - 2020), zonke ezi zinto zenzeka phantsi kobunkokheli bukaWhitaker.
"UDavid ubuyisela kuthi indibaniselwano enqabileyo nenamandla-ubutyebi obuninzi bamava kunye nolwazi loluntu lwethu, kudityaniswa nelizwe elibalulekileyo lamava afunyenwe ngokwazisa ezimbini zezona ntlobo zahlukeneyo zaseMntla Melika eChicago naseToronto," utshilo uGMCVB Usihlalo uBruce Orosz. Le ndibaniselwano, ngakumbi kwezi zixeko zombini azikhokeleyo wazigqwesa njengendawo enkulu yendibano kunye nemisitho, izokunceda ishishini lethu lokwamkela iindwendwe kunye namaqabane ethu athathe iGreater Miami neMiami Beach baye kwinqanaba elilandelayo. "UDavid ukwazile ukuba nempumelelo enkulu ekukhuthazeni uluntu olwahlukeneyo kwaye ubonakalisa umdla onamandla wokukhuthaza iyantlukwano, ulingano kunye nokubandakanywa".
UWhitaker wakhethwa ekuqukunjelweni kophando lwesizwe oluneenyanga ezintandathu oluqhutywa yikomiti yokukhangela enamalungu ali-14 equlathe iinkokheli zeshishini nezoluntu ezibonisa ubuhlanga, ubuhlanga, isini kunye nokuziphatha ngokwesini, kunye njengokwahluka kwemibutho ethile kunye nemizi-mveliso eMiami-Dade County, ngakumbi ishishini lokubuka iindwendwe. Ikomiti yokukhangela yacetyiswa nguMike Gamble, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuSesha kwiHlabathi liphela, iqumrhu eliphambili lokukhangela elilawula indawo ye-DMO kunye noJaret Davis, Umnini-zabelo oLawulayo weGreenberg Traurig, igqwetha langaphandle leGMCVB. Ikomiti yokukhangela igunyazise uphando olubanzi lwabo bonke abagqatswa abanobuchule, ekuhlaleni nakwilizwe liphela, kuthathelwa ingqalelo ubume bukaMiami njengendawo yokufikela. Ikomiti yokukhangela iphinde yagunyazisa ukuba isileyiti sibonakalise iyantlukwano etyebileyo yaseMiami-Dade County, ekugqibeleni ikhokelele kwiseti yodliwanondlebe lokuqala, i-75% yayo yayihlukile kwisini, ubuhlanga kunye nembono ye-LGBTQ kunye ne-25% yayo yayiquka i-Afrika-yaseMelika ukumelwa. Udliwanondlebe lwesibini lwaluquka ama-50% abagqatswa abahlukeneyo ngokwesini, ngokobuhlanga kunye nembono ye-LGBTQ, i-25% yayo yayinabameli base-Afrika baseMelika. Lilonke, eli qela, lincediswa yi-SearchWide Global, lenza imibuzo okanye lafumana ngaphezulu kwabafundi abanokuba li-125 kuluntu lwasekhaya, kwilizwe liphela nakwamanye amazwe, kwaye baqhuba iintlanganiso ubuso ngobuso nabagqatswa abasibhozo kumjikelo wokuqala kunye nabagqatswa abane Umjikelo wesibini.